Qelasy, အိုင်ဗရီကို့စ်တွင်ပြုလုပ်သောပညာရေးသင်ပုန်း - Afrikhepri Fondation
တနင်္ဂနွေ, 11 rပြီ, 2021
ကြိုဆို BLACK တီထွင်သူနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ
Qelasy ဆိုသည်မှာ Akan ဘာသာဖြင့် "class" ကိုဆိုလိုသည်။ တက်ဘလက် ပညာရေးပတ်ဝန်းကျင်လတ်လိမ့်မည်။ ဒါဟာကျောင်းသားနှင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများမှ software နှင့် tools တွေကိုကမ်းလှမ်းသည့်ပညာရေးဆိုင်ရာတက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ တက်ဘလက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းပြည်တိကျတဲ့သင်ခန်းစာများ Textbooks ။ တက်ဘလက်ကိုလည်းသင်တန်းများနှင့်ကျောင်းသားအကဲဖြတ်အတိုင်းလိုက်နာရန်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကဆရာ, ဆရာမ, ကျောင်းသားနှင့်မိဘများကစာသင်ခန်းထဲမှာအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
ဒီဇိုင်နာအတွက်မီးမောင်းထိုးပြသည့်အတိုင်း Qelasy, Thierry N'Douffou, တက်ဘလက်ဆရာများအစားထိုးရန်မည်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးအပြန်အလှန်သင်တန်းပစ္စည်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ ပညာရေးဆိုင်ရာတက်ဘလက် ထို့ကြောင့် Qelasy သည်မိဘများအား ၄ င်းတို့ကလေး၏အတန်းကိုတက်ခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်စာပေးစာယူနှင့်စာရွက်စာတမ်းကဒ်ပြားတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
တက်ဘလက်၏သတ်မှတ်ချက်များတွင်အောက်ပါ Qelasy များမှာ
- လည်ပတ်မှုစနစ်များ : အန်းဒရွိုက် 4.2 - မျက်နှာပြင် - ၈ လက်မ - ပရိုဆက်ဆာ - Quad-core 8 Ghz - မှတ်ဉာဏ် - ၁၆ GB - အလေးချိန် - ၄၈၀ ဂရမ် - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် - ၈ နာရီ - ရောင်းဈေး - ၂၇၀ ယူရိုသို့မဟုတ် 180 000 CFA
အဆိုပါပညာရေးတက်ဘလက် Qelasy ရေနှင့်မြေမှုန့်မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အသေးဆုံးနေရာတိုင်းအပေါင်းတို့နှင့်အခြေအနေများအတွက်၎င်းတို့၏တက်ဘလက်ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
တက်ဘလက် Qelasy သုံးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည် - မိဘကုဒ်ပါသည့်ကလေးငယ်များအတွက်“ ကလေး” - မြီးကောင်ပေါက်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက် - ကျောင်းသားများအတွက် -“ ယူနီ”
ပညာရေးတက်ဘလက်တစ်ခုချင်းစီထုတ်ဝေ software ကိုရပါလိမ့်မယ် တိကျတဲ့။ ထို့အပြင် ပို. အလုပ်ဝင်ရောက်ဖို့စွမ်းရည်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မည်, စ Qelasy တစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံထားလျှောက်လွှာစတိုးဆိုင်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အများအပြား features တွေ Qelasy, အထူးသဖြင့်တက်ဘလက်ပါစေ။ ဤရွေ့ကားအခြားသူတွေအကြားရှိပါတယ်
•ကျောင်းသားအိတ် 15 ကီလိုဂရမ်ပေမယ် 500 ဂရမ်ထက်လျော့နည်းသယ်ဆောင်ရန်မလိုဘဲအားလုံးအမှုတော်တို့ကို, သူ့စာအုပ်တွေ, နှင့်အခြားသောပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုနှင့်အတူလူတန်းစားသွားခွင့်ပြု Qelasy dematerialized အကြောင်းအရာကျောင်းကိုလွယ်အိတ်။
• Qelasy နှင့်အတူ, မိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ သူတို့က, applications များကျောင်းသားကိုဝင်ရောက်နိုင်သည့်ကျောင်းသားကသူ့ Qelasy သုံးပါနှင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ခြင်းနှင့်အချို့ဝဘ်ဆိုဒ်များခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ်ငြင်းပယ်နိုင်သည့်အချိန်ကဆုံးဖြတ်။ Qelasy နှင့်အတူမိဘသည့်အချိန်တွင်မဆိုဆရာ, ဆရာမနှင့်အတူကျောင်းသားများနှင့်လဲလှယ်သူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် tablet ကို Qelasy မှတ်စုများအတိုင်းလိုက်နာနိုင်ပါတယ်။
Qelasy ရေစိုခံ weatherproof နှင့် dustproof ဖြစ်ပါသည်•, မိဘမိုးရွာရွာ, ဖတ်စာအုပ်များနှင့်ကျောင်းသားစာအုပ်ပုံနှိပ်စောင့်မတော်မူပင်အတွက်နှစ်သိမ့်စေနိုင်သည်။ တက်ဘလက်၏မိုးသည်းထန်စွာမြေဆီလွှာ၏အမှု၌, ကမဆိုစွန့်စားမှုမပါဘဲရေနှင့်သန့်စင်နိုင်ပါတယ်နှင့်ထို့ထက် ပို. Qelasy အန္တရာယ်မရှိဘဲတစ်ရက်စဉ်အတွင်းအထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုပါရန်ကောင်းတစ်ဦးဘက်ထရီသက်တမ်းရှိပါတယ် မျိုးသုဉ်း။
• Qelasy access ကိုမဖြစ်မနေဖော်ထုတ်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။ အရာမှခွင့်ပြုချက်ပေးသနားခဲ့ကြသကဲ့သို့ Qelasy မသုံးနိုငျသညျ။ ထို့အပြင် Qelasy ထူးခြားကျောင်းသားတစ်ဦးမှတစ်ဦးတက်ဘလက် assign ဖို့ဟာ့ဒ်ဝဲ၏ကြိုတင် activation လိုအပ်သည်။
• Qelasy အနေနဲ့ပညာရေး tool ကိုမပျော်စရာတက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကသာစာအုပ်များ, application များနှင့်ပညာရေးဂိမ်းများကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းမာလ်တီမီဒီယာများနှင့်အပြန်အလှန်အကြောင်းအရာနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်ဖတ်စာအုပ်များနှင့်လက်စွဲမှဝင်ရောက်ခွင့်, က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် application ကိုစတိုးဆိုင်နှင့်စာအုပ်များရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ခွင့်ပြု
• Qelasy က 3G အင်တာနက်ခွင့်ပြု, တစ်ဦးချိတ်ဆက်တက်ဘလက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစသင်တို့ရှိသမျှသည်ကျောင်းသို့မဟုတ်မိဘများ၏စောင့်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကိုခေါ်များနှင့်ပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကအပြောင်းအရွေ့အပေါ်ပညာရေးကိုလက်လှမ်းမီများအတွက်ပညာရေးစကားသံကိုပေါင်းစပ် packages များနှင့်ဒေတာများပူဇော်ရန်အော်ပရေတာနိုင်ပါတယ်။
• Qelasy သည်တက်ဘလက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲကျောင်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျောင်းများတွင်၎င်းသည်အကြောင်းအရာများကိုတက်ဘလက်များသို့တွန်းတင်ရန်ဒေသခံကွန်ယက်ပေါ်တွင်မှီခိုသည်။ မိဘများနှင့်လဲလှယ်ရန်သူမသည်အင်တာနက်ကိုအားကိုးနေရသည်
• Qelasy ကြောင့်လည်းပေးသွင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာအယ်ဒီတာနှင့်ပညာရေး applications များမိတ်ဖက်များအတွက်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။
SOURCE မှ: http://news.abidjan.net/h/490252.html
အမျိုးအစား BLACK တီထွင်သူနှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ
စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Dreamgirls (2006)
Green Book ကိုကြည့်ပါ။ တောင်ဘက်လမ်းများပေါ်တွင် (၂၀၁၈)
Ho'oponopono - ဟာဝိုင်အီကုသသူများ၏လျှို့ဝှက်ချက်